कसरी एउटा अपडेट गरिएको वा नयाँ रोबोट.टाक्सट फाइल पुन: सबमिट गर्ने Martech Zone
हाम्रो एजेन्सी ह्यान्डल गर्दछ जैविक खोज परामर्श उद्योग मा धेरै सा विक्रेताको लागि। हामीले हालैमा काम गरिरहेको ग्राहकले एक धेरै मानक अभ्यास गरेको थियो, उनीहरूको सबडोमेनमा अनुप्रयोग राखेर उनीहरूको ब्रोसर साइटलाई कोर डोमेनमा सार्न। यो एक मानक अभ्यास हो किनकि यसले दुबै तपाईंको उत्पादन टीम र तपाईंको मार्केटि team टीमलाई अन्यमा कुनै निर्भरता बिना नै अद्यावधिक गर्न सक्षम गर्दछ।
उनीहरूको जैविक खोज स्वास्थ्यको विश्लेषणको पहिलो चरणको रूपमा, हामी दुबै ब्रोसर र अनुप्रयोग डोमेनहरू वेबमास्टरहरूमा दर्ता गर्‍यौं। त्यो हो जब हामीले तत्काल मुद्दा पत्ता लगायौं। सबै अनुप्रयोग पृष्ठहरू खोज ईन्जिनले अनुक्रमित गर्नबाट ब्लक गरिएको थियो। हामीले वेबमास्टर्समा उनीहरूको रोबोट.टक्स्ट प्रविष्टिमा नेभिगेट गर्यौं र यस मुद्दालाई तुरून्त पहिचान गर्यौं।
माइग्रेसनको तयारीको क्रममा, उनीहरूको विकास टोलीले चाहेन कि एप्लिकेसन सबडोमेन खोज द्वारा अनुक्रमित होस्, त्यसैले तिनीहरूले खोजी ईन्जिनहरूमा पहुँच अस्वीकार गरे। Robots.txt फाइल एक फाईल हो जुन तपाइँको साइटको जडमा फेला पर्‍यो - yourdomain.com/robots.txt - यसले खोजी ईन्जिनलाई थाहा दिन्छ कि उनीहरू साइट क्रल गर्नु पर्छ कि हुँदैन। तपाइँ नियमहरू पूरै साइट वा विशेष मार्गहरूमा अनुक्रमणिकालाई अनुमति दिन वा अनुमति नदिन लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको साईटम्याप फाईल निर्दिष्ट गर्न तपाईले लाइन पनि थप्न सक्नुहुनेछ।
यो रोबोट.txt फाईलसँग निम्न प्रविष्टिहरू थिए जसले साइटलाई क्रल गर्न र खोजी परिणाम क्रमवारीमा अनुक्रमणिका हुनबाट रोकेको थियो:
प्रयोगकर्ता-एजेन्ट: * अस्वीकृत: /
यो निम्नानुसार लेखिएको हुनुपर्दछ:
प्रयोगकर्ता-एजेन्ट: * अनुमति दिनुहोस्: /
उत्तरार्द्धले साइट क्रल गर्ने कुनै पनि खोजी ईन्जिनलाई अनुमति प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूले साइटको भित्रमा कुनै निर्देशिका वा फाइल पहुँच गर्न सक्दछन्।
महान ... त्यसैले अब कि robots.txt फाइल उत्तम छ तर गुगलले कसरी थाहा पाउँदछ र कहिले साइट फेरि जाँच गर्दछ? ठिक छ, तपाइँ बिल्कुल अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ कि गुगलले तपाईको रोबोट.टी.टी.टी जाँच गर्नुहोस्, तर यो धेरै सहज छैन।
नेभिगेट गर्नुहोस् गुगल खोजी कन्सोल खोज कन्सोल गर्न क्रोल> रोबोट्स। टेक्स्ट परीक्षक। तपाईंले परीक्षक भित्र हालसालै क्रल गरिएको रोबोट.टक्स्ट फाइलको सामग्री देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो रोबोट.टी.टी.टी. फाइल पुनः सबमिट गर्न चाहानुहुन्छ भने सबमिट क्लिक गर्नुहोस् र पपअप केही विकल्पहरूको साथ आउँनेछ।
अन्तिम विकल्प हो गुगललाई अपडेट गर्न भन्नुहोस्। त्यो विकल्पको छेउमा निलो सबमिट बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फिर्ता नेभिगेट गर्नुहोस् क्रोल> रोबोट्स। टेक्स्ट परीक्षक पृष्ठ पुन: लोड गर्न मेनू विकल्प। अब तपाईंले अद्यावधिक गरिएको रोबोट.टक्स्ट फाइलको साथ मिति टिकट देख्नु पर्छ जुन फेरि क्रल भएको देखिन्छ।
यदि तपाइँले अद्यावधिक संस्करण देख्नुभएन भने, तपाइँ क्लिक गर्नुहोस् सब्मिट र क्लिक गर्नुहोस् अपलोड गरिएको संस्करण हेर्नुहोस् तपाइँको वास्तविक रोबोट्स। टेक्स्ट फाईलमा नेभिगेट गर्न। धेरै प्रणालीहरूले यो फाईल क्यास गर्नेछन्। वास्तवमा, आईआईएसले उनीहरूको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस मार्फत प्रविष्ट गरिएका नियमहरूको आधारमा यस फाइललाई गतिशील रूपमा उत्पन्न गर्दछ। तपाईंले सम्भावित रूपमा नियमहरू अपडेट गर्नुपर्नेछ र क्यास रिफ्रेस गर्नुपर्नेछ नयाँ रोबोट्स। txt फाईल प्रकाशित गर्नका लागि।
टैग: गुगल वेबमास्टरहरूरोबोटrobots.txtrobots.txt फाईलएसईओवेबमास्टर्स